Zakariye: Alqaacidda xiriirka ayay u jartay Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Zakariye: Alqaacidda xiriirka ayay u jartay Alshabaab
Mareeg.com: Zakariye Ismaaciil Xirsi oo horay uga mid ahaa saraakiisha sarsare ee Alshabaab, balse ka baxay ayaa sheegay in Al-Qaacida xiriirka ka goostay Al-Shabab.
Waraysi uu siiyey VOA ayuu Zakariye Ismaaciil ku sheegay in ururka Al-Qaacida aysan tacsi usoo dirin Al-Shabab markii la dilay hoggaamiyihii hore ee ururkaas Axmed Cabdi Godane ee loo yaqaanay Abuu Zubeyr.
Zakariye Ismaaciil waxa uu sheegay in uusan filayn in Al-Shabab ay ku biiraan ururka ka dagaalama waddamada Siiriya iyo Ciraaq ee ISIS ama Khalaafada Islaamiga ah.
Waxa uu sheegay inay iman karaan duruufo ku kallifa Al-Shabab inay ku biiraan balse aanu haatan filayn inay taasi dhacdo mustaqbalka dhow.
Zakariya Ismaaciil Xersi, ayaa qaba in ku biiritaanka Al Shabaab ee Daacish ay imaan karto, iyagoo laba garab u kala jaba, oo markaas dhinac ka mid ah uu ku biiro Daacish ama Khalaafada.
Zakariye Ismaaciil Xirsi oo wax laga weydiiyey bartilmaameedsiga hoggaamiyayaasha Al-Shabab ayaa sheegay in qaabka lagu waajahayo Al-Shabab ay u baahan tahay istiraatijiyo dhammaystiran oo isugu jira qaab dhinaca diinta ah, warbaahinta iyo siyaasadda.
Waxa uu sheegay in mustaqbalka fog bartilmaameedsiga shaqsiyaadka ah uusan wax saamayn ah ku yeelan doonin Al-Shabab.
Dhawaanahan waxaa soo baxayey warar aan la xaqiijin oo sheegaya in madaxada Alshabaab ku kala feker duwan yihiin iney ku biiraan Daacish iyo ineyn kusii jiraan Alqaacidda oo ay horay beyco ula galeen.